Raha eny ny valin-teninao amin’io fanontaniana farany io, dia tokony ho fantatrao hoe diso hevitra ny olona mieritreritra fa tsy maintsy omena fahafaham-po ny faniriana hanao firaisana. Asehon’ny Baiboly fa manana ny fahamendrehany ny olombelona, matoa omeny toky fa afaka mifidy ny tsy hanaraka ny filan-dratsiny.—Kolosianina 3:5.
Tsy hentitra loatra ny Baiboly. Mitovy ihany ny zavatra takiny amin’ny rehetra, na lehilahy tia lehilahy io, na lehilahy tia vehivavy. Samy asainy ‘mandositra ny fijangajangana’ izy ireo. (1 Korintianina 6:18) An-tapitrisany ny lehilahy tia vehivavy na vehivavy tia lehilahy mifehy tena na dia misy fakam-panahy aza, satria te hankatò ny fitsipiky ny Baiboly. Afaka manao toy izany koa ny lehilahy tia lehilahy na ny vehivavy tia vehivavy raha tena te hampifaly an’Andriamanitra.—Deoteronomia 30:19.